Diyaaradaha Kenya oo Duqeyn ku dilay 30 ka tirsan Maleeshiyaadka Kooxda Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Diyaaradaha Kenya oo Duqeyn ku dilay 30 ka tirsan Maleeshiyaadka Kooxda Shabaab
Kismaayo (Keydmedia) - Diyaaradaha Kenya ayaa Maanta duqeymo xoogan ka fuliyay qeybo ka tirsan Gobbolka Gedo oo ay fariisimo ay ku leeyihiin Maleeshiyaadka kooxda Shabaabka, waxaana duqeymahaasi lagu dilay 30 katirsan Maleeshiyaadka Kooxda Shabaab.
Sida ay sheegayaan Wararka naga soo gaaraaya qeybo ka mid ah Gobolka Gedo diyaaradaha dagaalka ee dowladda Kenya ayaa maanta duqayn xooggan ka geysteen inta deegaanka Irigle oo oo ku yaalla inta u dhexeeysa degmooyinka Garbahaarey iyo Buurdhuubo ee gobolkaasi Gedo.
Duqaynta ayaa waxaa lala eegtay saldhig ay Maleeshiyaadka kooxda Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Irigle waxaana la sheegay in uu halkaasi ka dhashay khasaare ballaaran soo gaaray Maleeshiyaadka la duqeeyay.
Wax yar kadib markii ay duqeynta dhacday oo Keydmedia ay la xariirtay saraakiisha TFG-da iyo kuwa kooxda Ahlu sunnada sheegata ayaa waxaa ay xaqiijiyeen in tirada Maleeshiyaadka Shabaabka laga dilay ay hadda mareyso ilaa 30 Maleeshiyo, ayadoona ay dhici karto bay yiraahdeen in khasaaraha dhimasho ay intaasi ka badan karto.
Wixii ku soo kordha kala soco Keydmedia.net